သိမ်ဝင်ပုတီး | ဘဝအလင်းရောင်
****နမော တဿဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ****
Posted by ဘ၀အလင်းရောင် at 4:58 AM
''ဦးဇင်း သိမ်ဝင်တဲ့အခါ သပိတ်ထဲ ဒီအထုပ် ကလေး ထည့်ပေးပါဘုရား''
နံနက် ရှစ်နာရီအချိန် ကျောင်းတွင် ရဟန်းခံရှိ၍ သိမ်ဝင်ရန် အသွားဖြစ်သည်။ ကိုရင်တစ်ပါး အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုကာ စာရေးသူ အား လက်ကိုင်ပ၀ါဖြင့် ထုပ်ထားသော အထုပ်ကလေး တစ်ထုပ် လာပေးသည်။
ကိုရင်ပေးသော အထုပ်ကလေးကို စာရေးသူယူ လိုက်သည်။ မည်သို့သော အထုပ်နည်းဟုသိလိုဇောဖြင့် ချက်ချင်းပင် အထုပ်ကို ဖြေကြည့်လိုက်၏။ တွေ့မြင် ရသည်မှာ စိပ်ပုတီးနှင့် လက်ဖွဲ့များဖြစ်သည်။
'' ကိုရင်-ဒီပစ္စည်းတွေဟာ ကိုရင့်ပစ္စည်းတွေ လား...ဒါမှမဟုတ် ကိုရင်ကို ဘယ်သူက ပေးခိုင်းလိုက်တာ လဲ''
ဒီပစ္စည်းတွေက တပည့်တော်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ ဘုရား။ ဒကာကြီး တစ်ယောက်က ပေးလိုက်တာပါ။ သိမ်တက်သွားတဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါးပါးကို ပေးလိုက် ပါဆိုလို့ လာပေးတာပါဘုရား''
''ဒီလိုဆိုရင် ပစ္စည်းတွေကို ပိုင်ရှင်ဒကာကြီးကို ပြန်ပေးလိုက်။ ကိုရင်လဲ နောက်ဒီလိုပေးခိုင်ရင် လာမပေး နဲ့ နော်''
စာရေးသူလည်း အထုပ်လေး ကိုရင့်ထံ ပြန်ပေးကာ သိမ်ထဲသို့ ၀င်ခဲ့လေသည်။
ဤကဲ့သို့သော အဖြစ်မျိုးစာရေးသူ အကြိမ်ကြိမ် ကြုံရပါသည်။ ထိုဖြစ်ရပ် မျိုးမှာ တောရောမြို့ပါ ဖြစ်နေ၏။ ရဟန်းခံ၊သိမ်ထပ်ကိစ္စတိုင်း ရဟန်းလောင်း၏ သပိတ်၊ သိမ်ထပ်မည့် ရဟန်း၏ သပိတ်ထဲတွင် စိပ်ပုတီး၊ လက်ဖွဲ့၊ အင်းအိုင်၊ ခါးလှည့်များနှင့် ရေမွှေးဖြင့် စိမ်ထားသောအဆောင် ပုလင်းကလေးများ ထည့်ထားသည်ကို အမြဲတမ်းလိုလို အနည်းနှင့်အများတွေ့မြင်နေရ၏။
ထိုသိမ်ဝင်ထားသည်ဆိုသော စိပ်ပုတီး လက်ဖွဲ့ အဆောင်တို့ကို ကိုင်ဆောင် သူများက 'စိပ်ပုတီး လက်ဖွဲ့အဆောင်တို့သည် မည်မျှအစွမ်းထက်ကြောင်း၊ သိမ် အကြိမ်မည်မျှဝင်ထားကြောင်းကိုင်ဆောင်သူအ
ပေါင်းက ဂုဏ်ယူ ၀င့် ကြွား စွာ ပြောဆိုကြသည်ကိုလည်း တွေ့မြင်ရဖူး ၏။
သိမ်ဝင်ပုတီး သိမ်ဝင်လက်ဖွဲ့အဆောင်အစွမ်း ထက်သည် မထက်သည်မှာ ကိုင်ဆောင်သူတို့သာ အသိ ဆုံးဖြစ်၏။
ထိုနေရာ၌ စာရေးသူ ဆန်းစစ်တင်ပြလိုသည်မှာ ရဟန်းခံရာသိမ်နှင့် အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့တို့သည် မည်သို့သက်ဆိုင်နေပါသနည်း။ သိမ်နှင့်ပုတီးသည် မည်သို့ ပတ်သက်နေပါသနည်း။ သိမ်ဝင်သော ပုတီးနှင့် သိမ်မ၀င်သော ပုတီးသည် မည်ကဲ့ သို့ကွာခြားမှုရှိနေသနည်း ဟူ၍ပင်ဖြစ် သည်။
''သိမ်'' ဟူသောစကားသည်''သီမာ''ဟူသော ပါဠိစကားမှ မြန်မာမှု ပြုထားသော စကားဖြစ်သည်။ “ နယ်ပယ်အပိုင်းအခြား“ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ သီးသန့်ပိုင်းခြား ထားသော နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သိမ်သည် ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်အတွက် အလွန်အရေးပါ အရာရောက် သော နေရာဋ္ဌာနလည်းဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အရေးပါအရာရောက် သောသိမ်ကို ဥပုသ်၊ ပ၀ါရဏာနှင့် သံဃာညီညွတ်စွာ
သံဃာ့ကံများ အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်ရန် မြတ်ဗုဒ္ဓက ''အနုဇာနာမိ ဘိက္ခဝေ သီမံ သမ္မ န္တိတုံ'' (၀ိ-၃-၁၄၄) ဟုဆိုကာ ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့၏။
ထိုခွင့်ပြုချက်အတိုင်းပင် သံဃာ့ကံများနှင့် ရဟန်းခံခြင်း အမှုတို့ကို ပြုလုပ်ကြရသည်။ ရဟန်းခံရာတွင် သံဃာတော် များက ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မ၀ါစာဖြင့် ရွတ်ဖတ် ချီးမြှောက်ရ၏။ သံဃာတော်များ ရွတ်ဆိုသော ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မ၀ါစာသည် ဥပသမ္ပဒကံဆောင်ရာတွင် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းက ရဟန်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန် သံဃာ့အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာ ဋ္ဌာနသိမ်၌ ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် ပြောဆိုခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
ယင်းသို့ရွတ်ဆိုသော ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မ၀ါစာတွင် အင်းအိုင် ခါးလှည့် ပုတီး တို့ကို အစွမ်းထက်စေသော ပါဠိစကားတစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ မပါဝင်ပေ။
သံဃာတော်များ ရွတ်ဆိုသော ဉတ္တိစတုတ္ထ ကမ္မ၀ါစာကို သဘော အဓိပ္ပါယ်သိသာရုံမျှ အကျဉ်းချုံး
သည်။သူ့မှာသပိတ်နှင့် သုံးထည်သော သင်္ကန်းတို့လည်း ပြည့်စုံနေပါပြီ။ ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုလျှင် သံဃာတော်
များက ရဟန်းလောင်း(နာဂ) ကို ရဟန်းပြုပေးပါရန် ကြိုတင်၍ အသိပေးအပ်ပါသည် ”ဟုဆိုကာကြိုတင်အသိ
ပေး ဉတ် ကမ္မ၀ါစာရွတ်ဖတ်ကြရ၏။
“ ရဟန်းလောင်း(နာဂ)ကို သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းက ရဟန်းပြုပေးပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ရဟန်းပြုပေးခြင်းကို သဘောတူလျှင် ဆိတ်ဆိတ်နေတော်မူပါ။ သဘော မတူသူရှိလျှင် ကန့်ကွက်ပြောဆိုပါ။ နှစ်ကြိမ်မြောက်၊ သုံးကြိမ်မြောက်ထပ်မံ ပြောဆိုပါသည်။ သဘောမတူလျှင် ဆိတ်ဆိတ်နေတော်မူပါ။ သဘောမတူလျှင် ကန့်ကွက် ပြောဆိုပါ ” ဟုအဆိုတင်သွင်း၏။
ထိုသို့အဆိုတင်သွင်းပြီးလျှင် ''သံဃာ့အဖွဲ့ အစည်းက ရဟန်းလောင်းနာဂကို ရဟန်းပြုပေးပြီးပါပြီ။ သံဃာ့အစည်းအဝေးက ဆိတ်ဆိတ်နေသောကြောင့် သဘောတူသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုပါသည်'' ဟုဆိုကာ အတည်ပြုချက်ကို ကြေညာ၏။
ကမ္မ၀ါစာအဆုံး တတိယမြောက် ''သောဘာသေယျ'' အရောက်တွင် ရဟန်းဖြစ်ပါတော့သည်။
အထက်ပါ ကမ္မ၀ါစာ အဓိပ္ပါယ်တွင် အင်းအိုင် ခါးလှည့်တို့ကို အစွမ်းထက် စေသော စကားလုံးတစ်လုံး တစ်ပါဒမျှ မပါဝင်သည်ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ရာ ဉတ္တိ စတုတ္ထကမ္မ၀ါစာသည် အင်းအိုင် ခါးလှည့်တို့ကို အစွမ်း မထက်စေနိုင်ကြောင်း သိသာထင်ရှားပေသည်။
သို့သော်လည်း ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မ၀ါစာကို သံဃာတော်များက ဌာန် ကရိုဏ်း ပယတ် ဗျဉ္စနဗုဒ္ဓိ ၁၀-ဖြာညှိလျက် ကျနစွာ ရွတ်ဖတ်နေကြသည်ကိုပင် တန္တရ မန္တရနွယ် ၀င် ဂိုဏ်းဆရာတို့ ဥုံ-သြောင်းခံကာ ဂါထာမန်းမှုတ် နေသကဲ့သို့ မန်းမှုတ်နေသည်ဟု မှတ်ထင်မှတ်လေသည်လား တော့မသိပေ။
အင်းအိုင် ခါးလှည့်လက်ဖွဲ့ဆိုသည်မှာ တန္တရ မန္တရနွယ်ဝင်ဂိုဏ်းဆရာတို့၏အသုံးအဆောင်များဖြစ်ကြ၏။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် လုံးဝ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပေ။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် မသက်ဆိုင်သော တန္တရ မန္တရနွယ်ဝင် ဂိုဏ်းဆရာတို့ ၏ အသုံးအဆောင် အင်းအိုင် လက်ဖွဲ့တို့သည် ဗုဒ္ဓသာသနာ၏ အထွတ် အမြတ်ထားရာ သိမ်နှင့် ရဟန်းလောင်း၏ သပိတ်ထဲ
မျက်နှာပြောင်တိုက်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အဆီအနှစ်ပြည့်ဝသော ထောပတ်အိုးကြီးထဲသို့ အညစ်အကြေးများ ကျနေသကဲ့သို့လည်း ဖြစ်နေပေသည်။
ထိုသို့သော အပြုအမူများကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ မနေသင့်ကြပေ။ သာသာနာ့တာဝန် အသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကာသတိပြု ပယ်ရှားကြရမည် ဖြစ်၏။
နောက်တစ်ခုကား ''သိမ်ဝင်ပုတီး'' ဖြစ်၏။ ဥပသမ္ပဒ ကမ္မ၀ါစာ ရွတ်ဖတ် နေသောအချိန်၌ သိမ်ထဲက
သပိတ်ထဲတွင် ရှိနေသော ပုတီးဖြစ်သည်။
သော်လည်း ပုတီးသည် ဘာဝနာလုပ်တွင် အသုံးပြု သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘာဝနာသည် သမထ ဘာဝနာ၊ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာ ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။ ထိုသို့ ဘာဝနာ နှစ်မျိုးရှိရာတွင် ပုတီးကို သမထ ဘာဝနာ အရာတွင် အသုံးပြုကြသည်။ သမထဘာဝနာ ၌လည်း များသောအားဖြင့် အနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်း အရာတို့တွင် ပါဝင်အသုံးပြုကြသည်။ ထိုသိုအသုံးပြုခြင်း ကြောင့် အကျိုးးမယုတ်ပေ။
သို့ရာတွင် အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပုတီးနှင့်စပ်၍လွန်ကဲသော ယုံကြည်မှုများဖြစ်ပေါ်လာကြ၏။ ပုတီးကို နံ့သာပုတီး၊ဂြိုဟ်ပုတီး၊ဂမုန်းပုတီး စသည်အားဖြင့် အမည်အမျိုးမျိုးပေးရုံသာမက 'သိမ်ဝင်ပုတီး' ဟုဆိုကာ သာသနာ တော်၏ အရေးပါ အရာရောက်သောသိမ်ကိုခုတုံးလုပ်အဆန်းထွင်လာကြ၏။
သိမ်ဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ သိမ်မ၀င်သည်ဖြစ်စေ ပုတီး သည် ပုတီးသာဖြစ်၏။
သိမ်ဝင်-မ၀င်ကားအဓိက အရေးပါလှသည်မဟုတ်။ အဓိက အရေးပါသည်မှာ မိမိ၏ စိတ်ကို မပျံ့လွင့်
စေဘဲ စိတ်တည် ငြိမ်မှု သမာဓိရအောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပြုလုပ်အားထားခြင်းသည်သာပဓာနကျသောအရာဖြစ်
ကြောင်း သတိပြုသင့် သည် များကိုသတိပြုနိုင်စေရန် တိုက်တွန်းရေးသား တင်ပြရပါသည်။ ။
0 comments em “သိမ်ဝင်ပုတီး”
နွံထဲကလာပေမဲ့ သန့်စင်ခြင်းတွေ သူ့ဆီမှာ..။ အမှောင်ထဲက လာပေမဲ့ သန့်စင်ခြင်းတွေသူ့ဆီမှာ..
လူတွေဟာ ကောင်းကျိုးကိုသာ မျှော်ကြတယ်။ အကောင်းကို ခံစားချင်တယ်။ အကြောင်းကောင်းအောင်တော့ မလုပ်ချင်ကြဘူး။ အကြောင်းကောင်းအောင် မလုပ်လျှင် အကျိုးကောင်းရမှာ မဟုတ်ဘူး။ (အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဆရာတော်ကြီး)
မ​င်း​ကွ​န်း​ဆရာေ​တာ်ြ​ကီး နှ​င့်​ ပဲခူးြ​မို့​​မ ဆရာေ​တာ်ြ​ကီး
ဧရာဝတီ၊ ချင်းတွင်း၊ စစ်တောင်း၊ သံလွင်ဟူ၍ အမည်များ ကွဲပြားခြားနားနေစေကာမူ နောက်ဆုံး ဦးတည်ချက်သည် ပင်လယ်တွင်းသို့ စီးဆင်းသွားကြသည်။ ဦးတည်ချက်၊ အရောင်အသွေးတူညီလျှင် အငြင်းပွားမနေဘဲ ညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ကြမှသာ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်မည်။ သီတဂူဆရာတော်
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပဲခူးမြို့ သာသနာ့လင်းရောင်ကြည် ဆရာတော်
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပညာသင် မြန်မာရဟန်းတော်များ သာယာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
ဓမ္မပဒ ပါဠိ မြန်မာ အင်္ဂလိပ်
Lotus Foundation International
ကံ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဗုဒ္ဓသာသနာ နှင့် ဂိုဏ်းကွဲများ
ဗုဒ္ဓသာသနာ နှင့် ဂိုဏ်းကွဲများ ...
စိန်ရတနာဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသာသန၀ရ ၏ ပရိယတ္တိသာသနာရေး အတွေးအခေါ်များ
စိန်ရတနာဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသာသန၀ရ ၏ ပရိယတ္တိသာသနာရေး အတွေးအခေါ်များ ၁။ ဓမ္မစေတမန် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန် ထိုအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် သာသနာရေး အမျိုးမျိုး ဆောင်...
အားလုံးမှာတာဝန်ရှိသည် ------------- မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးသည် အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီး လွပ်လပ်ရေးရခါနီးတွင် နိုင်ငံတော်ကြီးကို အ...
ဘယ်ရပ်ဌာေ​န ဘယ်ဆီများ​သွား​ပါ​လိ​မ့်​ ရန် ကုန်မှ​စစ်တွေ​သို့ ​ကားြ​​ဖ​င့်​​​ သွားနို...
မနက်က မောင်ထွန်းထံက ကြားလိုက်ရသောစကားကြောင့် သူ့စိတ်အစဉ်က စိုးရိမ်မှတ်သို့ ရောက် သွားခဲ့သည်။ ထိုစိုးရိမ်မှတ်ကို ဘာ...
ဆရာကြီး နန္ဒာသိန်းဇံ၏ ဈာပနအခမ်းအနား မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
ဆရာကြီး နန္ဒာသိန်းဇံ၏ ဈာပနအခမ်းအနား မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ ဆရာကြီးနန္ဒာသိန်းဇံ၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်၉-နာရီအချိန်တွင် ရေဝေးသုတ္တာန်၌ ...
နေ့သစ် ရဲ့ မနက်ဖြန်
နေ့သစ် ရဲ့ မနက်ဖြန် သူငယ်ချင်းရေ…. နေ့သစ်ဆိုတာ အတိတ် ဖြစ်ရပ်တွေက မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ ဘ၀ရဲ့ အရိပ်သစ် တစ်ခုပါ…။ ဒါကြော...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ အိန္ဒိယဧ။်ရာသီဥတုသည် နေထိုင်း၍အလွန်ကောင်းနေသေးသည်။ ခရီးသွားလို့လည်း စိတ်ကြိုက်ရာသီဥတုဟုပြောရမည်ထင်ဧ။်..။ ထိတွေ့ခွင့်ရရှိနေသေ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗုဒ္ဓဂယာ မှာကျင်းပခဲ့သော ဓာတ်တော် လှည့်လည်ပူဇော်ပွဲ
3. 2. 2012 ရက်နေ့က ဗုဒ္ဓဂယာမှာ Vietnam က Ven.Vietnamese Sangha TAO-DONA, QUYEN-LAN and QUY-T...
ပငျလုံညီလာခံကို အအေကေလှဲပွီး NCA လကျမှတျမထိုးထားတဲ့ အဖှဲ့ ၇ ဖှဲ့ကို ဖိတျမယျ
မွနျမာအလုပျသမားတှေ ထိုငျးမှာ တရားဝငျအလုပျလုပျဖို့ ပွနျသှားနိုငျတော့မယျ
ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB)
VOA ( မြန်မာ )
SCASINO | casino riva | Betway | site counter | casino
ဘဝအလင်းရောင် Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger